Monday October 08, 2018 - 08:43:10 in Wararka by Warsheekh Muqdisho
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8-da bisha Octoober 2018, waxa ay kulan ku yeelanayaan Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Ajendaha kulanka Xildhibaanada Baarlamaanka maanta ayaa waxa uu yahay Akhrinta koowad Dib u Eegista H/Sharciyeedka Hanti dhowraha.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa xalay loo diray fariimo ku aadan in maanta uu jiro kulanka Golaha Shacabka,kaasi oo Ajendihiisu yahay Akhrinta koowad Dib u Eegista H/Sharciyeedka Hanti dhowraha.
Ammaanka Xarunta Golaha Shacabka ayaa saakay aad loo adkeeyay,iyadoona Ciidamada amniga ay xireen Wadooyinka soo gala iyo kuwa kabaxa Xarunta Golaha Shacabka.
Ciidamada amniga dowlada Soomaaliya ayaa saakay xiray Wadooyinka soo gala iyo kuwa kabaxa Xarunta Golaha Shacabka,iyadoona hadda gudaha Xarunta laga dareemayo qaban qaabada Kulanka maanta ee Golaha Shacabka.